Pure Black Launcher Theme APK ကိုဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » စင်ကြယ်သောက Black Launcher ကိုအဓိကအကြောင်းအရာ
စင်ကြယ်သောက Black Launcher ကိုအဓိကအကြောင်းအရာ APK ကို
အဆိုပါဂန္သန့်စင်သောအမဲရောင်အတွက်အဓိကအကြောင်းအရာ - Android အတွက်ကဒီမှာနောက်ဆုံးတော့ပါ!
အခုအချိန်မှာသန့်စင်သောအမဲရောင်စတိုင်အတွက်ပင်မမျက်နှာပြင်ရယူပါ! စင်ကြယ်သောက Black ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ပေးသူဆောင်ပုဒ်, အန်းဒရွိုက်အခမဲ့နူးညံ့သောဒီဇိုင်း themes များ။ သန့်စင်သောအမဲရောင်အိုင်ကွန်ဗူး & သန့်စင်သောအမဲရောင်ဝေါလ်ပေပါတွေနဲ့သန့်စင်သောအမဲရောင်ဆောင်ပုဒ်ပျော်ရွှင်ခံစားပါ!
စင်ကြယ်သောက Black Theme ကိုထောက်ပံ့ပေး👇👇👇
✔️စင်ကြယ်သောက Black app ကို icon များ,
✔️စင်ကြယ်သောက Black wallpaper ကို;
✔️3D အကူးအပြောင်းသက်ရောက်မှု Cool ။
🎁Youလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ, android ဖုန်းအဘို့ဟာ android များအတွက်အကောင်းဆုံး launchers များထဲမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ Launcher ကို အသုံးပြု. လိမ့်မည်။ android ဖုန်းအခမဲ့, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်, HD နောက်ခံပုံများ, ဖုန်းအာနိသင်တိုးမြှင့်, ဘက်ထရီချွေတာပြီးပိုအဘို့အ themes များနှင့်အတူအားလုံးတဦးတည်း launcher တစ်ခု!
★ Themes ယခုအမျိုးအစားမှာပြကြသည်! အလွယ်တကူဟာ android အခမဲ့သင်အကြိုက်ဆုံး themes များရှာပါ။
★ android များအတွက်အကောင်းဆုံး launchers တဦးအဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွင့်တင်ဟာ android အခမဲ့ launcher themes များပေးပါသည်။ android ဖုန်းအခမဲ့ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်း launcher themes များနှင့်အတူပင်မမျက်နှာပြင်ကိုတက် Style ။ သန့်စင်သောအမဲရောင်ဝေါလ်ပေပါတွေနဲ့သန့်စင်သောအမဲရောင်ဆောင်ပုဒ် မှလွဲ. ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွင့်တင်ဟာ android အခမဲ့ (ပေါ်ပြူလာဂိမ်း launcher themes များအတွက် launcher themes များ, ရုပ်ရှင် launcher themes များ, ဂန္ကို Android launcher themes များ, မိန်းကလေး launcher themes များ, ရိုးရှင်းသော launcher themes များစသည်တို့ကို) အတွက်များစွာသောအခြား themes များပေးပါသည်။ android ဖုန်းအခမဲ့နောက်ထပ်အပြင်အဆင်များမကြာမီလာမယ့်!
မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များ & အကြံပြုချက်များအဘို့, feedback.launcher@gmail.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ပိုပြီးစတိုင် themes များရရှိရန် ME Launcher ကို Download လုပ်ပါ!
5.05 ကို MB
အန်းဒရွိုက်အခမဲ့အဘို့အ themes များကိုချစ်။
ထူးခြားသော Launcher …
Fancy တင်ပေးသူ ...